I-Euractiv, iXesha lezeziMali, i-Politico yase-Yurophu ayixelelanga OKUNYE NGENXA kwileta evulekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » I-Euractiv, iXesha lezeziMali, i-Politico yase-Yurophu ayixelelanga OKUNYE NGENXA kwileta evulekileyo
Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • abantu • Xanduva • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
UNjingalwazi Geoffrey Lipman, umongameli we-International Climate Friendly Travel Community (ICTP) kunye no-Juergen Steinmetz, ongusihlalo we-World Tourism Network waqhwabela izandla imibutho eli-16 yase-Europe ngokwala ukuthatha inxaxheba kwiminyhadala yase-Yuropa eyayiququzelelwa ziimpapasho ezixhasa ngokuphandle i-fossil fuel.
I-16 yemibutho yoluntu ekhokelayo ithe ayizukuphinda yamkele izimemo zokuthetha kwimisitho yemithombo yeendaba ngomgaqo-nkqubo we-EU oxhaswe ziinkampani zepetroli.
Benza isibhengezo kwileta evulekileyo eya kubahleli bemibutho emithathu yeendaba zaseYurophu, i-Euractiv, i-Financial Times kunye ne-Politico Yurophu.
Ileta ifundeka ngolu hlobo: Mnumzana / Nkosikazi, Njengabaxhasi baseYurophu bezenzo zemozulu kunye nobulungisa bemozulu, sinibhalela ukuze sinazise ukuba asisayi kuphinda samkele izimemo zokuthetha kwimisitho ehlelwe ngumbutho wakho weendaba kumgaqo-nkqubo we-EU ngenkxaso yefosili iinkampani zepetroli.
Kumzi mveliso wefosili, njengecuba eliphambi kwalo, umfanekiso uyinto yonke. Ukubonwa njengeqabane elisemthethweni kunye nenxalenye yesisombululo kwingxaki yemozulu kubalulekile. Ngokuxhasa iminyhadala ephezulu ehlelwe ziindawo zosasazo ezinjengezakho, ishishini leefosil lithenga iqonga lokufumana ukuthembeka kunye nefuthe elingelilo.
Ngexesha apho ulwazi olungachanekanga lusasazeka kwimidiya yoluntu, kwaye xa intengiso kunye nomxholo wokuhlela ziya zisiba nzima ukuhlukanisa, sikholelwa ngokuqinisekileyo ukuba imithombo yeendaba yasimahla inendima ebaluleke kakhulu ekufuneka iyidlalile ukugcina idemokhrasi kunye nentetho yasimahla.
Nangona kunjalo, ukuqhubela phambili kokunganikezeli akwenziwanga ngokuvumela imboni yeefosili ukuba ixhase amaqonga eendaba. Indima eqhubekayo yamalahle, ioyile kunye nomdla kwigesi ekukhawuleziseni imeko yemozulu kunye nokujongela phantsi isenzo semozulu ayingombono, kwaye ukuvumela ishishini ukuba liqhubeke nokucwangcisa incoko kunganceda ukulibazisa amanyathelo akhawulezileyo afunekayo ukunciphisa ubushushu behlabathi ukuya inqanaba lendalo kunye noluntu lunokumelana.
Ngamazwi ezigidi zabantwana besikolo ababetha imozulu: indlu yethu iyatsha.
Umzi mveliso weefosili unetoti yepetroli esandleni sakhe. Xa iinkampani zepetroli zisebenzisa ukuthembeka kwamaqonga akho eendaba njengenxalenye yesicwangciso sokusetha imigaqo yengxoxo yoluntu kunye nokuzibeka kufutshane nabenzi bezigqibo, uyabanceda bathulule umlilo emlilweni.
Siya kuvuyela ukuba upapashe le leta ukuze abafundi bakho kunye nabathathi-nxaxheba kwiminyhadala bazi malunga nokuba kutheni imibutho yethu ingekho kuyo nayiphi na iminyhadala onokuthi uyiququzelele ngenkxaso yeshishini leefosil. Kwaye siyakubongoza ukuba uqhubele phambili ngokujongana nengxaki efihlakeleyo yefuthe lamafutha eefosili, ngokuthi ungaphindi uququzelele nawuphi na umsitho ngenkxaso yeenkampani zeefosili.
Ubumbano lweYurophu Observatory
I-European Federation yeeManyano zikaRhulumente
Ukutya naManzi aSebenza eYurophu
Abahlobo bomhlaba iYurophu
Abahlobo bamanye amazwe
Ezothutho kunye neNdalo esingqongileyo
IOfisi yoMgaqo-nkqubo yaseYurophu